128 အဘို့ရလဒ် dora
Wonderland ထဲမှာဒိုစွန့်စားမှု, သူမသငျသညျဒိုရာပစ်မှတ်ကိုထိကူညီခြင်းနှင့်မှတ်ရ, တော၌တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူမြှားပစ်ဂိမ်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့။
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ဒိုရာသစ်တောထဲမှာလျှို့ဝှက်စွန့်စားမှုရှိသည်။ သို့သော်ထိုလမ်းအတွက်များစွာသောမိကျောင်းရှိသည်, သူမ၏ခုန်ကူညီခြင်းနှင့်မြှားသော့နှင့် Space Bar ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကတိုက်ခိုက်။
သင့်ရဲ့စူပါမာရီယို! ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ဒါဟာသင် Bowsers မြည်းကိုကန်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုလိုသည်။ နှင့်သင့်ပြုပါသွားအတိအကျဘာ Hacking ကို။ တစ်ဦးအေးမြမာရီယိုတိုက်ပွဲများဂိမ်း! သင့်ရဲ့မာရီယိုတိုက်ပွဲများကျွမ်းကျင်မှုဂိမ်းထဲကနေအပေါငျးတို့အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ဆန့်ကျင်ပြပါ။
ခဲယဉ်းဦးထုပ် Hustle gumball
ဒါဝင်ခြင်း, ရယ်စရာကာတွန်းစီးရီး Gumball ၏အံ့အားသင့်စေကမ္ဘာ့ဖလား၏အဓိကဇာတ်ကောင်အားလုံးဂျယ်လီပဲစုဆောင်းအဆင့်တိုင်း၌သူ၏မိတ်ဆွေများရောက်ရှိရန်ကိုကူညီပါ။ အဆိုပါမိတ်ဆွေများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သင့်ရဲ့စွန့်စားမှု၌သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
မာရီယိုရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက်များစွာသောသတ္တဝါတွေနှင့်ရန်သူများကိုမှသင်၏ရဲတိုက်ကိုခုခံကာကွယ်။ ထွက်နေတဲ့, ပိုမိုအားကောင်းပလာစမာရိုင်ဖယ်များနှင့်ထို့ထက် ပို. သေနတ်များကိုရယူပါ။
ronin - ထားစိတ်ဝိညာဉ်အား
Super Mario ဗုံးခွဲသူ
ဗုံး Place နှင့်ဤမာရီယိုဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တက်မှုတ်ဖို့ကြိုးစား
Amy winehouse လွတ်မြောက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကမ္ဘာကျော်ဗြိတိသျှတို့အဆိုတော် Amy Winehouse ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာကနေလွတ်မြောက်လိုသော်လည်းလွန်းရှိမကြိုက်ဘူး။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာန်ထမ်းကသူတို့နှင့်အတူအစာရှောင်ပျော်စရာလိုက်ရှာသည်
SpongeBob ကသူ့မစ်ရှင်ပြီးစီးခြင်းနှင့်သင့်ရမှတ်တိုးမြှင့်ဖို့ cave.Collect ကနေအကြွေစေ့လွတ်မြောက်ရန်ကူညီပါ။
Popeye ဆိုင်ကယ် 2
Popeye ပျော်စရာဆိုင်ကယ်ဂိမ်းနှင့်အတူနောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်။ ချိန်ခွင်လျှာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်မကျဖို့ကြိုးစားပါ။ crashing မပါဘဲဆိုင်ကယ်စီး။ ပျော်စရာကောင်းသောကံရှိသည်!
သငျသညျဟငျးလြာမြားပစ်တပြင်လုံးကိုအချိန်အပြေးငြီးငွေ့င်သောဤစားပွဲထိုးကိုကူညီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ထားပြီးအဆင့်အတန်းကိုတက်ရွှေ့ဖို့တ္ထုပစ်လိုက်။ သင့်ရဲ့ mouse ကိုသုံးပါ။